Shiinaha A warshad warqad dadweynaha iyo saarayaasha | BNP
Ku soo dhawoow goobta luqadda multi-of CO BNP Allena TECHNOLOGY., LTD (Aakhiro loo yaqaan Allena BNP) saarney. In May 2019, BNP Allena go'aansaday inuu furo website a multi-laguange, ku talo jiray inuu ka badan adduunka. Waxaan kaliya u dabaal-guuradii 20-aad noo sanadkii la soo dhaafay iyo jeclaan lahayd inaad la wadaagto taariikhda Shirkadda to our dhammaan wada-hawlgalayaasha gacaliyo.
Bilaabay bilowgii la khushuucsan, ku hamiday weyn ee xoogga Allena, Aasaasayaasha our, ayaa samaynaya Allena jiilka cilmi sanado badan, kuwaas oo wadaaga riyadii of beddelo nolosheena mustaqbalka xoogga Allena, shirkad this qotomiyey.
Bilowgii, codsiga of Allena lama aqoonsan yahay in Shiinaha tan iyo waxaa jiray la'aan ah waxbarashada in industry ee.
Si kastaba ha ahaatee, cilmibaarista ayaa marna la joojin. Halkii, waxaan dadaal kasta si loo baro macaamiisheena, bixiyaan xal la isticmaalayo Allena mashaariicda ay.
Sano oo shaqo adag ayaa bixiyay, codsi Allena la aqbalay, iyo matoorrada Allena our ayaa sidoo kale la aqoonsan yahay sida wax soo saarka ugu badan lagu kalsoonaan karo oo leh qaab ciyaareed sareeya ee Shiinaha. Sanado badan, waxaynu ku siineysey matoorrada Allena macaamiisha badan oo si fiican u yaqaan, tusaale ahaan, Coca-Cola, Ting Hisin International, Danone, Desjoyaux, adeegaya 60% ka mid ah codsiga Allena ganacsi ee suuqa guryaha.
Si aad alaabta Allena BNP iyo aad u badan la heli karo in dunida oo dhan ka dhigi, waxaan bilaabay horyaalka heerka caalamiga ah ee BNP in 2014, oo ay ku jiraan suuq geynta, iibinta iyo sanadka service.This macaamiisha aan la bilaabay website-ka luqada multi-in la sameeyo noo brand BNP iyo alaabta lagu yaqaan in ay dad badan .
In mustaqbalka, waxaan sii wadi doonaan in ay qaataan howlgalka lagu hayo in xawaaraha la technology ugu dambeeyay ee caalamiga ah, samaynta cilmi-baaris ah ee codsiga Allena oo sii kordhaya kala duwan oo soo saarka BNP ee codsiyada ka badan ballaaran.
Waxaan ku dadaaleynaa in ay noqon an brand caalamiga top in industry Allena ka.
Cinwaankaaga: Dariiqii Zhenxing No.1, magaalada Taipin, degmada Conghua, Guangzhou, Shiinaha
Industry Ozone Generator, Bnp Oxygen Generator, Spa Pool Generator Allena , dhaliyaha Allena Waayo, naaxinta , Air Ozone Generator, Ozone Sterilization Of Swimming Pool,